မိတ်ဆွေတို့အတွက် တယ်လီနော ဒေတာအစီအစဉ် (Package) အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း | Grab MM
မိတ်ဆွေတို့အတွက် တယ်လီနော ဒေတာအစီအစဉ် (Package) အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း
Grab Bundle (2GB ဒေတာ , မိနစ် ၅၀ Telenor အချင်းချင်း ဖုန်းပြောဆိုခွင့်နှင့် , Telenor အချင်းချင်း အစောင် ၅၀ စာတိုပေးပို့ခွင့်တို့ကို ၂၉၉၉ ကျပ်တည်းနှင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ)
ရွေးချယ်ခံထားရသည့် Grab ယာဉ်မောင်းများသာ ထို Grab Bundle အစီစဉ်တွဲ ကိုဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ (စာတိုရရှိသည့် Grab ယာဉ်မောင်းများအတွက်သာ)
Grab Bundle တွင် ရက် (၃၀) အသုံးပြုနိုင်သော (2GB ဒေတာ , မိနစ် ၅၀ Telenor အချင်းချင်း ဖုန်းပြောဆိုခွင့် နှင့် , Telenor အချင်းချင်း အစောင် ၅၀ စာတိုပေးပို့ခွင့် တို့ကို ၂၉၉၉ ကျပ်တည်းနှင့် ဝယ်ယူ နိုင်ပြီ
အစီစဉ် ရရှိရန် – *3939# ဖုန်းခေါ်ရန် (သို့) 707 ကို TGRAB ဟု စာတိုပေးပို့ရန်
အစီစဉ်ကာလ – ၃ ရက်နေ့|မေလ|၂၀၁၈ မှ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ကြောင်းမကြေငြာခင်အချိန်ထိ
သက်မှတ်ထားသော Prepaid Grab ယာဉ်မောင်းများ အတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
အစီစဉ်ရရှိရန် : USSD (သို့) SMS
Bundle တွင်ပါဝင်သော ဈေးနှုန်းသည် သက်ဆိုင်ရာ အခွန်နှုန်းထား ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Q: Grab Bundle ဆိုတာ ဘာလဲ ? ဘာတွေ ပါမှာလဲ ?
A: Prepaid Grab ယာဉ်မောင်းများ အတွက်သာ အထူး ပြင်ဆင်ထားသော အစီစဉ်တွဲ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ထို Grab Bundle တွင် ရက် (၃၀) အသုံးပြုနိုင်သော (2GB ဒေတာ , မိနစ် ၅၀ Telenor အချင်းချင်း ဖုန်းပြောဆို ခွင့် နှင့် , Telenor အချင်းချင်း အစောင် ၅၀ စာတိုပေးပို့ ခွင့် တို့ကို ၂၉၉၉ ကျပ်တည်းနှင့် ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။
Q: Grab Bundle ရဲ့ ဈေးနှုန်း က ဘယ်လောက်လဲ ?
A: ၂၉၉၉ ကျပ် ကျသင့် မည်ဖြစ်ပါသည်။ (ဈေးနှုန်းသည် သက်ဆိုင်ရာ အခွန်နှုန်းထား ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။)
Q: Grab Bundle ကို သုံးစွဲနိုင်သည့် သက်တမ်းကာလ က ဘယ်လောက်ပါလဲ ?
A: ရက် (၃၀) ဖြစ်ပါသည်။
Q: Grab Bundle ကို ဘယ်လို ဝယ်ယူရမလဲ ?
A: အစီစဉ် ရရှိရန် : USSD (သို့) SMS ကိုအသုံးပြု၍ ဝယ်ယူနိုင် ပါသည်။
USSD : *3939# ဖုန်းခေါ်ရန်
SMS : 707 ကို TGRAB ဟု စာတိုပေးပို့ရန်
Q: Grab Bundle ကို တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဝယ်ယူလို့ရပါသလား ?
A: တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ အစီအစဉ်ကိုအကြိမ်ရေများစွာ ဝယ်ယူထားပါက အစီအစဉ်မှာရရှိမည့် အကျိုးခံစားခွင့်များမှာ ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ သက်တမ်းမှာ နောက်ဆုံးဝယ်ယူသည့်ရက်မှ ရက် (၃၀) အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။
Q: အသုံးမပြုရသေးသော အကျိုးခံစားခွင့် များ သက်တမ်းကာလကုန်လွန်သွားပါက ကျန်ရှိသော အကျိုးခံစားခွင့် များကို ထပ်ပေါင်း သုံးစွဲ၍ ရနိုင် ပါသလား ?
A: သက်တမ်းကာလကုန်လွန်သွားပါက ကျန်ရှိသော အကျိုးခံစားခွင့်များကို ထပ်ပေါင်း သုံးစွဲ၍ မရနိုင်ပါ။
Q: Telenor Prepaid အသုံးပြုသူ အားလုံးအတွက် အကြုံးဝင်ပါသလား ?
A: အားလုံးအတွက် အကျုံးမဝင်ပါ ။ ရွေးချယ်ခံထားရသည့် Grab Telenor Prepaid ယာဉ်မောင်းများသာ ဝယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Q: အစီအစဉ်ကာလမှာ ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါသလဲ ?
A: ၃ ရက်နေ့|မေလ|၂၀၁၈ မှ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ကြောင်းမကြေငြာခင်အချိန်ထိ ဖြစ်ပါသည်။
Q: Grab Bundle အစီအစဉ် နှင့် ဒေတာစုဘူးအစီအစဉ်များ တစ်ရက်ထဲတွင် ဝယ်ယူထားပါက မည်သည့်အစီအစဉ် လက်ကျန်ပမာဏမှ ဖြတ်တောက် မှာပါ လဲ။
A: Grab Bundle အစီအစဉ်မှ အရင်ဖြတ်တောက် မှာဖြစ်ပါသည်။
Q: အခြား ဖြစ်တဲ့ MPT (သို့) Oredoo ကို ဖုန်းခေါ်ခြင်း စာတိုပေးပို့ ခြင်းတို့ အတွက် Grab Bundle ကအကျုံးဝင် ပါသလား ?
A: အကျုံး မဝင်ပါ။ Telenor အချင်းချင်း ဖုန်းပြောဆိုခွင့် နှင့် , Telenor အချင်းချင်း စာတိုပေးပို့ခွင့်သာ။ အကယ်၍ အသုံးပြုလိုပါက ကိုယ်တိုင် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း ဖြင့် အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
Q: Grab Bundle အစီအစဉ်ရဲ့ လက်ကျန်ပမာဏကိုဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ ?
A: လက်ကျန်ပမာဏ (ဒေတာနဲ့အခြားရပိုင်ခွင့်) တွေကို *124*1# နှိပ်၍စုံးစမ်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက် – ဒေတာအစီအစဉ်အတွက် Subscribe လုပ်သူများကို အပတ်စဉ်တိုင်း၏ တနင်္လာနေ့တွင် Update လုပ်ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် စတင် Subscribe လုပ်ထားသောအပတ်၏ တနင်္လာနေ့မှ စပြီး ဆက်လက်သုံးစွဲ သွားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။